‘प्राविधिक ज्ञान अहिलेको आवश्यकता हो’ - समय-समाचार
‘प्राविधिक ज्ञान अहिलेको आवश्यकता हो’
६ आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:१७
काठमाडाैं, असाेज ६ । वर्तमान समय विज्ञान र प्रविधिको समय हो । मुलुकको विकासका लागि भौतिक तथा प्राकृतिक साधन स्रोतको जति मात्रामा भूमिका रहन्छ त्यो भन्दा बढी भूमिका जनशक्ति वा मानवशक्तिको रहन्छ । देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मानवीय पूँजी निर्माणका लागि प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य छ । प्राविधिक ज्ञान आर्जन गरेको व्यक्तिले मात्र प्राकृतिक साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गरी मानवकल्याणका निमित्त योगदान दिनसक्छ ।
हाम्रो देश नेपाल विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको दाँजोमा आर्थिक दृष्टिले, विकास निर्माणका दृष्टिले, रोजगारीका अवसरका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ । यसको एउटा पक्ष रोजगारीका अवसर कम हुनु हो । धेरै जसो मानिसहरू बेरोजगार छन् । जतिले रोजगारी पाएका छन् ती पनि पूर्णकालिक नभई अर्धरोजगार छन । जब व्यक्तिको आय नै कम छ भने जीवनस्तर राम्रो हुने कुरै भएन । मानिसले आफूलाई पूर्ण रोजगार बनाउन नसक्नुको एउटै कारण प्राविधिक शिक्षाको अभाव हो । यदि व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान छ भने उसले बिनाकाम समय खेर फाल्नु पर्दैन भन्छन् राजधानीको व्यस्त बजार बागबजारमा प्राविधिक ज्ञान सिकाउँदै आएका दीपक पोखरेल ।
सिप भए बेरोजगार हुनु पर्दैन । दक्ष जनशत्ति बन्ने अभिलासाका साथ विद्यार्थी सिक्न आउँछन् । आधुनिक तरिकाले तालिम दिन्छौं, जसले गर्दा रोजगार ग्यारेन्टी हुन्छ । राम्रो आमदामी भएकाले विद्यार्थीको राम्रो माया पाएको छु ।
बागबजारमा एलायन्स ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका पोखरेलले आफ्नो ट्रेनिङ सेन्टरमा तालिम लिएका कोही पनि बेरोजगार बस्नु नपर्ने दावी छ । उनका अनुसार तालिम लिएका विद्यार्थी दक्ष जनशक्तिरुमा बजारमा स्थापित हुने बताए ।
यो तालिमहरु हरके बर्ग, हरेक उमेर तर नर्मल टेक्निकल अंग्रेजी चाहि बुझ्न सक्ने हुनुपर्नेछ । र यसमा आखाले भने स्पष्ट देख्न सक्ने हुनुपर्छ । यसमा यो बाहेक कुनै मापदण्ड छैन । प्रविधिले विश्वलाई एउटै गाउमा सिमित बनाएको अवस्थामा प्राविधिक ज्ञान आवश्यक हो । त्यसो त अहिले कोरोनाले विश्व आर्थिक चपेटामा थलिएको छ । विश्व भर छरिएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि टाट पल्टिने क्रममा छन् । रोजगार प्रदान गर्दै आएका यस्ता कम्पनीले कामदारको संख्या घटाउने क्रममा छ । नेपाल जस्तो विकासउन्मुख देशका जनशक्ति विदेशमा छ । कोरोनाले स्वदेश फर्किने क्रम जारी छ । स्वदेश फर्किएपछि के गर्ने चिन्ताले पिरलिएका छन् । यस्ता जनशक्तिले प्राविधिक शिक्षा लिए बेरोजगार हुनु पर्दैन । यस्तो वर्गलाई यो अवसर हुन सक्छ ।
के हो प्राविधिक शिक्षा ? किन आवश्यकता छ ?
प्राविधिक शिक्षा एउटा स्वारोजगार बनाउने शिक्षा हो । जुन युवाका लागि यो निकै महत्पूर्ण । अहिले विश्व सबै प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रबिधिले संसारलाई नै एउटै परिधिमा समेटको छ । त्यसैले हरेक मान्छे प्रविधि र प्राविधकि पक्षमा जानकार हुन आवश्यक छ ।
किनकी यसको आवश्यकता पलपलमा पाइला पाइलामा प्रयोग हुने भएकोले लाखौ पर्ने सामानहरुलाई ममर्त गर्न सही किसिमको दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउन सकियो भने लाखौ पर्ने डिभाइहरु फाल्नु पर्दैन र यसले गर्दा कतै न कतैबाट देशको आर्थिक अवस्थालाई सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ भने धेरै युवापुस्ता विदेशजानबाट रोकिन्छन् र धेरैलाई रोजगार र व्यवसाय गर्न प्रेरणा दिने शिक्षा हो ।
अन्य रोजगार, वैदेशिक रोजगार र यसमा के फरक छ ?
रोजागरको भिन्नता भन्ने हो भने आ–आफ्नो ठाउँबाट सवै राम्रो हुन्छ । हाम्रो चाहाना त त्यो होइन कि युवापुस्ता विदेशिउन । युवालाई यो शिक्षामा दक्ष बनाएर नेपालका विभिन्न कम्पनिहरुमा रोजगार गर्ने वा अलिकित लगानी गर्न सक्नेले ५०.६० एक लाखको लागि विदेश जान पर्दैन भन्ने हो । यदि विदेश जाने यवा वर्गले पनि यो शिक्षाको दक्ष ज्ञान लिएर गएमा उच्च मूल्यांकन हुने गरेको छ ।
विद्यार्थीको रोजाई एलायन्स नै किन त ?
पहिलो कुरा त विद्यार्थी पैसा तिर्छु भन्दैमा भर्ना हुन पाइदैन किनकी भर्ना हुनुअघि केहि नियमहरु छन् । पूर्व योकिन गरिएको भन्दा हरेक युवा सपना बोकेर तालिम लिन जान्छ तर जुन सपना बोकेर जान्छ । त्यो अनुसारको ज्ञान नपाउने र असफल हुने भएकोले सफल बनाउन सकिन्छ र १००% मा १००% नै रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने सोचले एलायन्समा विद्यार्थी आउँदा आउँदै पनि सवै चिजलाई बन्द गराएर अन्तर्राष्ट्रिय तरिकाले अभ्यास दिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक कलेज र कम्पनीहरुसँग जोडिएर सुरु गरेको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीले भोलि गएर रोजगरा गरे पनि वा विजनेश गरेपनि सजिलो हुने गर्दछ । विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि जुन उपकरणहरु प्रयोग गरेर सिकाउँछ त्यो नेपालमा उपलब्ध हुने सबै भन्दा माथिल्लो स्तरका छन् । जसले गर्दा सिक्ने नयाँ विद्यार्थीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुनै नयाँ औजारमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
के हो एलायन्स ?
एलाइन्स यस्तो संस्था हो जसले बर्षोदेखि चीपलेवलको तालिम तथा मर्मतमा धेरै इलेक्ट्रोनिक्स प्रयोगकर्ताहरुलाई सेवा दिदै आएको र युवाहरुलाई सफल बनाउदै आएको संस्था हो। ISO 2009 र 2015 द्धारासर्टिफाइट एवं CTEVT द्धारा सम्बन्धन प्राप्त साथै विभिन्न International कम्पनीहरुसंग सहकार्य गरिएको एक मात्र तालिम केन्द्र Alliance हो। जहा अन्तराष्ट्रिय Level को Lab, Equipment साथै चाइना, भारत र अन्तराष्ट्रिय लेवलका कम्पनी, ट्रेनिङ कलेज, संस्थासंग सहकार्य गरेको संस्था हो।
कुनै पनि युवाहरुले कुनै पनि कोर्षमा Join भइसकेपछि जब सम्म सफल हुदैन तब सम्म सिक्न सकिने व्यवस्ता
अनलाइको Class Join गर्ने विद्यार्थीहरुलाई पुन: OFFLINE Class गर्दा थप शुल्क नलाग्ने।
विद्यार्थी सिकेर पास आउटभए पछि पनि नयाँ नयाँ समस्याहरु आउन सक्छ त्यसको लागि विद्यार्थीलाई लाइफटाइम अनलाइन सपोर्ट पाउनेछन। साथै विद्यार्थी तिरेको फि भन्दा धेरै खर्च गरेर किन्नुपर्ने Website का फाइलहरु जस्तै SCHEMATIC, BOARD VIEW, BIOS FILE, MOBILE FILE, यी सबै विद्यार्थीलाई एउटा Login ID बनाएर Life Time मा Provide गराइनेछ। साथै जति पनि नयाँ समस्याको समाधान गरिएका भिडियोहरु पनि अपडेट गराइनेछ।
कोर्षगर्दा Course Content मा मात्र सिमित नगराएर जब विद्यार्थीले बजारबाट आउने समस्या Minimum पनि पाँच देखिमा थिसोलुशन गर्न सक्दैन तब सम्म Certificate उपलब्धन गराइने।
कुनै विद्यार्थी Full Day’s Practical गरेर बस्न चाहन्छ भने Full Day’s Practical गरेर बस्न सक्ने पनि व्यवस्था गरिएकोछ।
Practical Time माहरेक Student लाई Per Person CRO, Microscope, DC Supply, Hot gun, Iron, all set, दिएर Training गराईनेछ
एलाइन्सले एडडभान्स लेवलको कोर्षमा Join हुने विद्यार्थीको लागी जुन Course मा Join हुन्छ त्यो कोर्ष गरिसकेपछि Business Open गर्न सक्ने वा Job गर्न सक्ने बनाएर छोडछ। यदी त्यो हुन नसकेमा उसको तिरेको Fee पनि रिटर्न गर्ने ग्यारेन्टी पनि छ।
एलाइन्सले Quantity भन्दा Quality लाई प्राथमिकता दिदै सीमित विद्यार्थीहरुलको लागी सीमित सिटमा भर्ना लिने गरेको छ।
ल्यापट मोवाइल टीभी पसल हुने तथा अन्य Training Center मा Training लिएर Hard Problems Solutation गर्न नसक्ने ब्यक्तिहरुको लागी उनीहरुको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुकको हातबाटै समस्याको समाधान गर्न सिकाइने। जसका कारण विद्यार्थीले तिरेको शुल्क कक्षा समयबाटै सो भन्दा बढी कमाइ गर्न सक्ने ।
Electronic Knowledge भएको +2 , Bachelor दिएर बसेकाहरुको लागी विशेष तालिमको व्यवस्था
एलाइन्स लेल्याप्टप, मोवाइल, आइफोन म्याक टिभी प्रिन्टरको तालिम मात्र नभइ यस सँग सम्बन्धीत आउने कुनै पनि समस्याको समाधान गरिने। साथै Technician लाई चाहिने हरेक Equipment आफै Import गर्ने भएकाले सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै अएकाे छ ।